समाचार – Wow Sansar
साहसिक छोरी जसले गरिन आफ्नी आमाको का’जकिरिया ! स्याङ्जा जिल्ला भीरकोट नगरपालिका वार्ड नं – १ बस्ने बुबा पदमकुमार श्रेष्ठ र आमा विष्णु श्रेष्ठकि कान्छी छोरी निला श्रेष्ठले आफ्नी आमा’को का’जक्रीया म आफैं गर्छु छोरी पनि छोरा नै हो छोरीले किन आमाको द’शकर्म गर्न हुन्न ? भनेर आफ्नी आमा’को का’जकिरिया आफैं गर्ने हि’म्मत गरेकी छिन् । बाबुआमा’को काज’किरिया गर्न छोरा नै चाहिन्छ भन्ने तर्कको दरिलो खण्डन गर्दै उनले समाजमा छोराछोरीको भे’दभावपूर्ण व्यबहारलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भन्दै छोराछोरी बराबरी हुन भने व्यबहारमै लागु हुनुपर्छ अनि मात्रै हाम्रो समाजको कु’सं’स्कार अन्त्य हुने बताएकि छिन । उनको यो साहसिक कदमले अन्य छोरीमात्रै हुने आमाबुबा र छोरीहरूलाई थप प्रेरणा र उर्जा दिने विश्वास गरिएको छ । ***भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला***
एजेन्सी । अष्टेलियामा एक महिलाले आफ्नो ४ महिनाको शिशुलाई निकै ख’तरनाक अवस्थावाट बचाएकी छन् । उनको यो शाहसिक कार्यको अहिले विश्वभर चर्चा भइरहेको छ । आमाले सन्तानको खुशीका लागि आफ्नो ज्यानको समेत पर्वाह गर्दैनन् भन्ने कथनलाई यि महिलाले पुष्टि गरेकी छन् । यसै हप्ता अष्ट्रेलियाको क्वीन्सल्याण्डमा एक २३ वर्षिया महिलाले आफ्नो ज्यान जोखिममा पारेर आफ्नो ४ महिने शिशुलाई बचाएकी छन् । २३ वर्षिया ती आमा हुन् फियोना सिम्पसन। उनी आफ्नो चार महिनाकी छोरी र हजुरआमाको साथमा बाहिर निस्केकी थिइन् । उनले कार चलाइरहेकी थिइन् । त्यही बेला अचानक मौसममा परिवर्तन आयो । ठूल ठूला असिना पर्न थाल्यो । हजुरआमा र छोरीलाई लिएर कफि सप बाट बाहिरीए पछि भएको सो घटनाले उनी आश्चर्यमा परिन् । असिनाका कारण उनले विस्तारै कार चलाइरहेकी थिइन्। तर असिना पर्ने क्रम विस्तारै बढ्दै गयो । पछि यस्तो सम्म भयो कि उनको कारको सिसानै फुट
महेन्द्रनगरमा तिब्र गतिमा हुँइकिदै आएको मोटरसाइकल अर्को मोटरसाइकलसँग ठोक्कियो काठमाडौ । गए राति मोटरसाइकल एकआपसमा ठो’क्किँ’दा कञ्चनपुरको कृष्णपुरमा दुई जनाको मृ’त्यु भएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्र्तगत यहाँको कृष्णपुर नगरपालिका–५ आम्खैयामा दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृ’त्यु र दुई जना घा’इ’ते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ । दुर्घटनामा परी से ६ प ३१६७ नम्बरको मोटरसाइकल चालक धनगढीको गोदावरी राइसमिल नजिक बस्ने २५ वर्षीय आशिष जोशी र सुप।प्र। ०१।००।७१५७ नम्बरको मोटरसाइकल चालक कृष्णपुर नगरपालिका–२ वाणीका ३५ वर्षीय जनक बोहराको मृ’त्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका निमित्त प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक अमरबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार दु’र्घट’ना’मा ग’म्भीर घाइते जोशीको धनगढीस्थित निशंर्ग अस्पताल र बोहराको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा मृ’त्यु भएको हो । सोही मोटर
काठमाडाैं, २ माघ ।भाटभाटेनी सुपर मार्केटले ग्रोसरी समानहरुमा १० प्रतिशत छुट दिने योजना ल्याएको छ । भाटभाटेनीले आजदेखि नै लागू हुने गरेर उक्त योजना ल्याएको हो । यो योजना सिमित अवधीको लागि मात्र लागू हुने बताइएको छ । बिशेषगरि दाल, चामल, तेल, मसला, बेकरी, प्रोजन मासुहरु, टवाईलेट्रिज लगायतका सम्पुर्ण खाद्य सामानहरुमा १० प्रतिशत छुट दिने कम्पनीको भनाइ छ । बिशेषगरि कोभिड–१९ महामारीले पारेको आर्थिक अफ्ठयारोमा भाटभाटेनी सुपर मार्केटले यस्तो स्कमी ल्याएको बताइएको छ । अन्तरबैंक कारोबारमा भारी गिरावट, यस्तो छ तथ्यांक चालु आर्थिक बर्षमा अन्तर बैंक कारोबारमा भारी गिरावट आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको चालु आवको पहिलो पाँच महिनाको तथ्यांकलाई हेर्दा यस्तो देखाएको हो । गत आवको पाँच महिनामा कुल ८ खर्ब ७२ अर्ब ५ करोडकोको अन्तर बैंक कारोबार भएको थियो । तर, यो बर्ष २ खर्ब ७ अर्ब ९ करोडको शेयर कारोबार भ
काठमाडौँ– आज साताको छैटौ दिन शुक्रबार, नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य तोलामा ४ सयले बृद्धि भएको छ । बिहीबार प्रतितोला छापावाला सुनको मूल्य ९२ हजार १ सय रहेको थियो । भने आज सुनको मूल्य बृद्धि भइ प्रतितोला सुन ९२ हजार ५ सय कायम भइ कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । त्यस्तै आज तेजावी सुनको मूल्य ९२ हजार रहेको छ । महासंघका अनुसार चाँदीको मूल्य तोलामा १५ रुपैयाँले बृद्धि भएको छ । बिहीबार प्रतितोला चाँदीको मूल्य १२ सय ४५ रहेको थियो । भने आज प्रतितोला चाँदी १२ सय ६० कायम भइ कारोबार भइरहेको छ ।
खोटाङ । खोटाङ जिल्ला अदालतमा कार्यरत कर्मचारी पढ्दा–पढ्दै मृत भएको अवस्थामा फेला परेका छन् । उनी आफु बस्ने कोठामा कपडा ओढेर सुतिरहेको अवस्थामा मृत भेटिए । नजिकै टेबलमा रहेका किताबहरु हेर्दा उनी पढिरहेका थिए ।प्रहरीको प्रारम्भिक अ’नुशन्धान अनुसार उनी उच्च र’क्तचा’पका कारण मृत्यु भएको आँकलन गरिएको छ । उनी सुर्खेत स्थायी घर भएर जिल्ला अदालत खोटाङमा कार्यरत सरकारी कर्मचारी कमलदिप ढकाल भएको खुल्न आएको छ । उनी अदालतमा तामेल्दार पदमा कार्यरत थिए । शाखा अधिकृतको तयारी गरिरहेका थिए ।******थप समाचारको लागी यो भिडियो” हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस’,******
काठमाडौं–नेपालमा पछिल्लो समय हरेक क्षेत्रमा महिलाको सशक्तिकरण भएको छ । राजनीतिक क्षेत्रमात्र नभएर अन्य क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढिरहेको छ । आर्थिक रुपमा महिलाको पहुँच कम । तर, पछिल्लो समय आर्थिक क्षेत्रमा पनि केही महिला सक्षम र नेतृत्वदायी भूमिकामा महिला छन् । जसले उनीहरुले उच्च तलब सुविधा बुझिरहहेका छन् । धेरै तलब सुविधा बुझ्ने मध्येकी एक महिला हुन् अनुपमा खुञ्जेली । खुञ्जेली मेघा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । ***याे समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस***** उनको वार्षिक तलब,भत्ता सहितको सुविधा बापत गत आर्थिक वर्ष पौने दुई करोड रुपैयाँ बुझेकी छिन् । उनी सम्भबतः नेपालमा सबैभन्दा धेरै तलब बुझ्ने महिलामा पर्छिन् । नेपालमा सरकारी क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै तलब खाने राष्ट्रपति हुन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मासिक तलब एक लाख ७७ हजार ५ सय ३१ रुपैयाँ हुन्छ । यसरी हेर्द
काठमाडौं। आफ्नो जीवनको केवल २० महिना मात्रै बिताउन पाएकी एक बालिकाले अन्ततः अन्य ५ जना बालबालिकालाई नयाँ जीवन दिएर मृत्युवरण गरेकी छिन् । गम्भीर दुर्घटनामा परेकी धनिष्ठा नामकी यी बालिकालाई अस्पतालमा डाक्टरहरुले ब्रेन डेड घोषित गरेपछि उनका मातापिताले उनका अंग दान गरिदिए । यससँगै भारतको दिल्लीको रोहिणीकी धनिष्ठा देशकै सबैभन्दा कान्छी अंगदाता बनेकी छिन् । उनको मुटु, कलेजो, मृगौला र आँखाका दुवै कर्निया दान गरिएको छ । धनिष्ठा ८ जनवरीमा खेल्दै गर्दा घरको पहिलो तलाको बाल्कोनीबाट खसेकी थिइन् । उनलाई सर गंगाराम अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । ११ जनवरीका दिन उनलाई ब्रेन डेड घोषित गरियो । धनिष्ठाका पिता आशिष कुमारले समाचार एजेन्सी आइएएनएससँग भने ‘डाक्टरहरुले हामीलाई धनिष्ठा ब्रेन डेड भइसकेको र उनी ठिक हुने कुनै सम्भावना नभएको बताउनुभयो । जतिबेला हाम्री छोरी अस्पतालमा भर्ना थिइन् त्यतिबेला हामीले यस्
भ’र्जिन अ’टला’न्टिक विमानमा यात्रा गरिरहेकी एक महिलाले उडिरहेको विमानमा नै शा’री’रि’क स’म्ब’न्ध राखेर सबैलाई चकित बनाएकी छन् । १३ मार्चमा गटविक एयरपोर्टबाट मेक्सिकोका लागि उडेको विमानमा ती महिलाले अपरिचित व्यक्तिसँग छोटो कुराकानीपछि यौ’न स’म्ब’न्ध राखेको खबर बाहिर आएको हो ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला ** सो फ्लाइट ११ घन्टाको थियो । ती महिलाले अपरिचित युवालाई सुरुमा चु’म्ब’न गरेको र त्यसपछि इकोनोमी क्लासको बाथरुममा गएर आ’प’त्ति’ज’न’क क्रि’याकलाप गरेको दि सनले जनाएको छ । दुवै जना बाथरुपमा छिरेको केही समयपछि विमानका कर्मचारीले ढोका ढकढकाएका थिए । जब ढोका खुल्यो त्यहाँ आ’प’त्ति’ज’नक अवस्था देखिएको विमानका कर्मचारीले जनाएका छन् ।रो’चक त के छ भने विमानमा चढ्दा यी दुईले एकअर्कालाई चिन्दैनन् थिए । बोरिङ पास लिँदासम्म पनि दुबैबीच परिचय भएको थिएन । विमानका प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार ती महिना र
दाङको तुलसीपुरमा ग्यास सिलिण्डर बिस्फोट हुँदा श्रीमान–श्रीमतीसहित तीन जना घाइते भएका छन् ।तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १७ वनकट्टा निवासी ३५ वर्षीय लालबहादुर वली र उनकी ३३ वर्षीया श्रीमती गीता वली गम्भीर घाइते भएका हुन् । घटनामा परि १३ वर्षीय सिजन खड्कापनि घाइते भएका छन्।घाइते वलीका श्रीमान–श्रीमतीलाई बिहीवार दिउँसो दूई बजेतिर तुलसीपुरबाट हेलिकोप्टर मार्फत थप उपचारका लागि काठमाडौं लगिएको छ ।****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
आफ्नै कार, नेपालगञ्ज र पोखरामा घर, ३३ बर्षकी युवती यति भएपछि केटालाई के चाहिन्थ्यो ! (3533)